Xinhua Myanmar - အလားအလာရှိသော အရေးပေါ်အသုံးပြုနိုင်မည့် ကာကွယ်ဆေးများ ထုတ်လုပ်နေသည့် တရုတ်ကာကွယ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူ နှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိ
တရုတ် ကာကွယ်ဆေး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ရှိ Sinovac သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ထုပ်ပိုးရေးစက်ရုံတွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) INTERNATIONAL ORGANIZATION
“တရုတ်နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ WHO ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဟာ လက်ရှိ WHO စာရင်းမှာ အရေးပေါ်အသုံးပြုဖို့ အလားအလာရှိတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေကို နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးမီထုတ်လုပ်ရေး အလေ့အထကို လိုက်နာခြင်းရှိမရှိ အကဲဖြတ်ဖို့ Sinovac နှင့် Sinopharm ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက် ကျေနပ်မိပါတယ်” ဟု Tedros က မကြာသေးမီက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် ပြောခဲ့သည်။
WHO အနေဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်သူများအား ၎င်းတို့၏ ကာကွယ်ဆေးများကို အရေးပေါ်အသုံးပြုရန်စာရင်းထဲ ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ ပံ့ပိုးပေးရေး အလျင်အမြန် ဆောင်ရွက်ကြရန် ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
“နောက်ထပ်ထွက်လာမယ့် ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေကို ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ထားသလို လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်တွေမှာ ဒါကို အရှိန်မြှင့်တင်ဖို့နဲ့ ကာကွယ်ဆေးကို သာတူညီမျှစွာ ခွဲဝေပေးခြင်းတွေလုပ်ဖို့ မြင်တွေ့လိုပါတယ်” ဟု Tedros က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-01-13 12:42:20|Editor: huaxia
WHO continues to ask vaccine manufacturers from around the world to move swiftly to provide necessary data that will allow the organization to consider them for emergency use listings, Tedros said.
"While we are hopeful about the safe and effective vaccines that are being rolled out, we want to see this sped up and vaccines allocated equitably in the coming weeks," Tedros said. ■
Previous Article ကမ္ဘာတစ်ဝန်း COVID-19 ဖြစ်ပွားမှု သန်း ၁၀၀ ရှိမည်ဟု WHO အကြီးအကဲခန့်မှန်း
Next Article ကမ္ဘာပေါ်တွင် COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ သန်းပေါင်း ၇၀ ကျော် အထိ ရောက်ရှိလာ